Maxaa la siinayaa gabadha saaxiibtaa. Tilmaamaha iyo tabaha ugu fiican | Ragga Stylish
Caadi ahaan labada lamaane waxaa la siiyaa hadiyado markay yimaadaan taariikho ka muhiimsan. Tusaale ahaan, sanad-guurada, Maalinta Jacaylka, Kirismaska, maalmaha dhalashada, iwm. Hadiyadaha waa muujinta kalgacalka iyo jacaylka aad u hayso si aad u xasuusato daqiiqado qaar. Bixinta wax bixinta ma aha ikhtiyaar wanaagsan. Xaqiiqdii waad fikireysaa maxaa la siinayaa gabadha saaxiibtaa Oo xitaa ma garanaysid meesha aad ka bilaabi lahayd
Maqaalkan waxaan ku baran doonaa xeelado iyo dhinacyo ay tahay inaad tixgeliso si aad u ogaato waxa la siinayo gabadha aad saaxiibka tahay.
1 Dhinacyo muhiim ah oo hadiyad ah
2 Fursadaha iyadoo loo eegayo dookhaaga
3 Waxyaabo wax ku ool ah iyo hadiyado labadaba
Dhinacyo muhiim ah oo hadiyad ah
Hadiyaddu maahan inay ahaato shay oo la iibsado. Sidoo kale ma aha inay waajib kugu ahaato adiga ama iyada. Caadi ahaan, waxaan bixinnaa markaan xusuusanno qofkaas oo aan ognahay in faahfaahintaas, wax kastoo ay tahayba, ay kaa farxin doonaan oo kaa caawin doonaan inaad inbadan na xusuusato mar kasta oo aad aragto ama aad isticmaasho. Hadiyadaha looma baahna in loo qoondeeyo munaasabadaha gaarka ah ama taariikhaha gaarka ah. Had iyo jeer waa wakhti fiican inaad ku muujiso jacaylkaaga iyo kalgacalka aad u hayso lamaanahaaga si faahfaahsan, ha ahaato mid maaddi ah iyo haddii kale.
Waxyaabaha ay tahay inaad tixgeliso waxaa ka mid ah dhadhankoodu inta badan. Faa'iido maleh inaad maskaxda ku hayso hadiyadda ugufiican haddii aysan u dhigmin dhadhanka saaxiibbadaada. Waa inaad raadisaa wax maaddi ah ama aan ahayn, sharraxaad dheeri ah ama aan ahayn, laakiin aad jeceshahay. Markaan ogaanno dhadhanka gabadha aad saaxiibka tihiin, waa inaad ka fikirtaa miisaaniyadda aan ugu talagaly. Ma waxaan dooneynaa inaan ku siino hadiyad lama iloobaan ah mise waxaa ku filan faahfaahin yar? Wax walba waa arrin dhadhan, lacag iyo ujeedooyinba.
Maaha wax isku mid ah inaad wax siiso dhacdo aan caadi ahayn oo noloshaada ah hadiyad ahaan aakhirka inaad ka yaabiso oo aad jebiso monotony. Waad ka imaan kartaa shaqada oo waxaad ku istaagi kartaa daaqada daaqada si aad ugu iibsato xayawaanka cufan ee dabeecaddiisa uu jecelyahay kana soo qaado taxanaha kartoonada ee yaraantiisii ​​ama waxaad siin kartaa baaskiil maxaa yeelay wuxuu u baahan yahay inuu magaalada ku dhex wareego.
Ka fikir waxa ay saaxiibadaadu u baahan tahay in ka badan damac. Hadiyaddu waa inay noqotaa wax waxtar leh oo aad badanaa isticmaasho. Haddii kale, waxay ku noqonaysaa buro kale oo ku jirta jirridda xusuusta.
Fursadaha iyadoo loo eegayo dookhaaga
Waxay kuxirantahay sida ay saaxiibadaadu tahay, waxaad siin kartaa wax shaqsi ahaan kafiican oo ku saleysan dhadhankeeda. Haddii aad ka mid tahay gabdhaha jacaylka leh oo aad jeceshahay dhaqanka, Waad dooran kartaa inaad siiso bouquet-ka caadiga ah ee ubaxa, shukulaatada ama xayawaan cufan.
Inaad siiso wax dhaqameed macnaheedu maaha inay noqoto caajis. Noqo asal Ku beddel bouquet-ka ubaxyada calaamadaha qaarkood oo ogeysiiya inay taada tahay iyo inay ka duwan tahay ubaxyada caadiga ah ee ubaxyada ah. Tusaale ahaan, waxaad ku ciyaari kartaa ubaxyo midabbo kala duwan leh oo waxaad isticmaali kartaa kuwa ugu midabada badan, taasoo muujineysa sannadihii / bilooyinkii aad wada joogteen. Intaas waxaa sii dheer, waad qarin kartaa sawir ay kujiraan qoraalo aad ku muujineyso sida aad ugu faraxsantahay iyada ama aad xasuusato daqiiqado lama iloobaan ah oo aad isla qaadatay.
Waxa kale oo aad astaysto shukulaatada. U soo iibso qaar ka mid ah jukulaatooyinka leh qaabab ama magacyo u gaar ah oo ay jeceshahay. Sidan ayaad ku kasban kartaa dhibco oo aad u noqon kartaa asal.
Haddii, dhinaca kale, gabadha aad saaxiibka tahay ay aad u jecel tahay muusikada, sii album album ah oo ay bixiso heesaaga ay ugu jeceshahay ama duub isku duba ridka hits-ka ugu fiican iyada si ay ugu haysato gaadhigeeda markay ka dhaqaaqayso meel kale. Uma baahnid inaad lacag badan ku bixiso haddiyadda. Faahfaahinta fudud ee raadinta heesaha aad ugu jeceshahay, soo dejinta iyo duubistooda ayaa mudan, oo xitaa in ka badan tagista dukaanka iyo iibsashada mid toos ah. Marka wuu ku xasuusan karaa waqti kasta.
In kasta oo ay xoogaa ka sii dhib badan tahay, iskuday inaad adigu sameysid hees. Ka raadi internetka heesaha laga yaabo inay ku habboon yihiin weedhaha iyo ereyada aad rabto inaad tiraahdo. Ku qas iyaga saldhig jacayl ama qaabka muusikada ee aad ugu jeceshahay. Wax kasta oo aad qorto, muhiimaddu waa faahfaahinta, waqtiga aad u hurtay iyo farriinta aad gudbisay.
Waxyaabo wax ku ool ah iyo hadiyado labadaba
Noocyada kale ee hadiyadaha, sidaan horayba u soo sheegnay, waxyaalo wax ku ool ah oo waxtar leh. Xaqiiqdii, maalinba maalinta ka dambeysa, gabadha saaxiibkaa ah ayaa kuu sheegi doonta "Waxaan u baahanahay tan ...". U fiirso waxa uu leeyahay oo qor wax walba. Ma jiro hadiyad ka wanaagsan wax aad u baahan tahay iyo in ka badan haddii ay degdeg tahay. Qiyaas inaad u baahan tahay kormeere cusub oo kombiyuutarkaaga ah maxaa yeelay kii hore kuu oggolaan maayo inaad daawato filimada aad ugu jeceshahay HD. Hagaag, maxaa hadiyad ah oo kafiican inaad u iibsato muraayad tayo wanaagsan oo aragga leh si ay ugu raaxeysato aflaamteeda oo aysan kaligeed ahayn, laakiin adiguba aad la joogtid oo aad daqiiqado fiican wada sameysid.
Hadiyad kale oo ay saaxiibadaa hubaal ka mahadcelin doonto waa safar. Ma jiraan wax la mid ah safarka iyo wax ka badan haddii loo sameeyo sidii lamaane. U safridda wadamo kale iyo barashada dhaqamada kale waa wax cajiib ah. Khibrad aad u baahan doonto inaad ku celceliso marar badan. Sidoo kale waa shay labadiinuba aad la kulmi kartaan oo hadiyad u noqon doonin iyada oo keliya. Hadiyadda waxaad ku dhex ridi kartaa hawraar sida spa, duugista ama baarka furan hoteelka.
Fikradda ayaa ah in adiga iyo iyada labadiinuba aad ku raaxaysataan hadiyadaha isla markaana ay idinka dhigaan waayo-aragnimo nool oo idin hodanaysa lammaane kaliya maaha wax la iibsaday oo aan qiimo iyo waxtar midna lahayn wakhtigaas.
Cuntada. Cuntada sidoo kale ma guul darreysato. Maaha inay ahaato cunno jaceyl oo leh shumacyo iyo menu jeebkaaga wax u dhimaya. Waa ku filan tahay inaad aragto iyada oo faraxsan oo cunaysa waxa ay ugu jeceshahay. Haddii ay jeceshahay eey kulul, u kaxee meesha aad ku aragto inay wanaagsan yihiin, eeyaha kulul ee qalaad oo leh maro aan u baran inay isku dayo. Sidee ugufiican ee ay saaxiibadaa ugula kulanto dhadhaminta cusub ee dhadhanka oo ay u furto dardaarankeeda khibradaha cusub ee cuntada.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkani ay kaa caawin doonaan inaad ogaato waxa la siinayo gabadha aad saaxiibka tahay oo aad ku guuleysato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Maxaa la siinayaa gabadha saaxiibtaa